“Costa aaduu ugu faraxsan yahay inuu nala sii joogo.”. Conte – Gool FM
“Costa aaduu ugu faraxsan yahay inuu nala sii joogo.”. Conte
Byare August 3, 2016
(London) 03 Agoosto 2016. Weeraryahanka reer Spain Diego Costa ayaa lala xiriirinayay inuu xagaagan dib ugu laabanayo kooxdiisa hore ee Atletico Madrid kaddib xilli ciyaareed adag uu ku qaatay Premier League.
Costa ayaa la aaminsanaa inuu doonayo inuu dib ugu laabto Madrid laakiin wuxuu u ballan qaaday Conte inuu sii joogi doono.
Conte ayay ka go’an tahay inuu sii heysto Costa iyadoo uu weerarka la soo saxiixday ilaa iminka Michy Batshuayi oo kaliya.
Macallina reer Talyaani ayaa doonayay weeraryahanka Real Madrid Alvaro Morata wuxuuna iminka eeganayaa inuu dib Chelsea ugu soo celiyo Romelu Lukaku ee u howl gala Everton.
Laakiin Conte wuxuu sheegay in Costa sii joogi doono: “Diego waa ciyaaryahan Chelsea ah, taasna waa tan ugu muhiimsan,” Conte ayaa sidaa yiri.
“Aad ayuu ugu faraxsan yahay inuu nala joogo innaga.
“Diego ayaa ka soo kabtay dhaawac uu qabay iminkana waa la heli karaa. Waxaan go’aansan doonaa goor dame shaxda iyo 11-ka aan ku soo bilaabayo. Laakiin waa la heli karaa waxaana ku faraxsanahay inaan xisaabsan karayo isaga.”.
GOOGOOSKA & SAWIRRADA: Manchester United vs Everton 0-0 (Mou & Man U oo Everton mari waayey)
Gareth Bale oo kaligii kireystay Jasiiradda Tagomago si uu dalab GUUR ugu bandhigo saaxiibtiisa Emma Rhys-Jones